Ukuthenga "Okunempilo" kwiBhajethi yeSNAP - iBhanki yokutya yaseGalveston County
admin Aprili 4, 2019 0 Comment Imfundo yezondlo
Ngo-2017, i-USDA yaxela ukuba izinto ezimbini ezithengiweyo ngumsebenzisi we-SNAP ebhodini lubisi kunye neziselo. Ingxelo ikwabandakanya ukuba i-0.40 yeedola kuzo zonke iziqhamo, imifuno, isonka, ubisi kunye namaqanda. Enye i-0.40 yeedola yaya kwizidlo ezipakishiweyo, iicereal, ubisi, irayisi kunye neembotyi. I $ 0.20 eseleyo iya kwiziselo ezinxilisayo, iichips, amashwamshwam anetyuwa, kunye nedessert. Akusiyo imfihlo ukuba ayingabo bonke abafumana i-SNAP abasebenzisa uncedo lwabo ukuthenga ukutya okusempilweni. Kodwa masingaqali ukwenza uqikelelo kwaye sigxeke ezi zinto zithengwayo. Ndingathanda ukukukhumbuza ukuba kunqabile ukuba kufundiswe ngezondlo ezikolweni kwaye kunqabile oogqirha banike iingcebiso ngalo mbandela; endaweni yokutsiba kwizigqibo zokuba kutheni abafumana i-SNAP bethenga ii-sodas kunye nokunye "ukutya okungenamsoco" masiqwalasele ukuba singakutshintsha njani oku kuthengwayo!
Iidola zakho ze-SNAP zingasetyenziselwa izidlo eziya kuhlala ixesha elide kangange veki nangenyanga, usolula ngokwenyani idola yakho. Ukubuya, ngethemba lokuba uya kuba neentsuku ezimbalwa zokugula, okanye ubuncinci uzive unamandla ngakumbi ngeendlela zakho ezintsha zokuthenga ukutya. Umndilili wekhaya we-4 ofumana izibonelelo ze-SNAP eTexas ufumana malunga ne- $ 460 / ngenyanga kwizibonelelo (ngokusekwe kuphando lwe-intanethi, eli nani linokubonakala lahlukile kubamkeli abaninzi). Oko kuphuma kuhlahlo-lwabiwo mali lwe- $ 160 ngeveki. Ukuhlala kuhlahlo-lwabiwo mali kubaluleke kakhulu, kwaye ukunceda oko, ukucwangciswa kokutya kubalulekile. Ndiza kuhamba nge-160 yeedola zesidlo sakusasa esempilweni, isidlo sasemini, amashwamshwam, kunye nesidlo sangokuhlwa kubonakala ngathi.
I-adventure yam indisa kwi-HEB yendawo apho ndenze khona ukuthenga "okunempilo". Ndenze isampulu yesicwangciso sesidlo seveki ngeveki sosapho lwabane sisebenzisa olu hlahlo lwabiwo mali.
Qala isidlo sakusasa iveki. Zama ukuthenga izinto ezinokusetyenziswa ngeendlela ezininzi; oku kuyolula idola yakho nangakumbi. Khetha iimveliso zevenkile xa zitshiphu. Ukuba uthenga inyama eqhutyiweyo, njengebhekoni kunye nesoseji; zama uku khetha iimveliso zendalo okanye ezo zinesodium. Le bacon yenye yezinto zethu ze "splurge" kwi $ 4.97 kwiphakheji, kodwa kufanelekile! 100% yengqolowa iphelele isonka sisempilweni, kwaye yayiyi- $ 1.29 kuphela, iisenti ezimbalwa ngaphezulu kwesonka esimhlophe. Khetha iiyogathi ezingenanto, endaweni yezo sele zinencasa (ezo zilayishwe iishukela ezongeziweyo); endaweni yoko yongeza eyakho Iiswiti zendalo ezinje ngobusi neziqhamo. Yithambise i-oatmeal yakho ngendlela efanayo! Qinisekisa ukongeza iziqhamo ezininzi kunye nemifuno nayo (eyethu ikwimifanekiso kamva!)
Amaqanda- 18 ct: $ 2.86
I-Bacon- 2 pkgs: $ 4.97 x 2 = $ 9.94
Ithafa iyogurt enamafutha asezantsi: $ 1.98
Oats- 42 oz: $ 1.95
Ubusi- 12 oz: $ 2.55
Ijusi yeorenji + calcium - ½ gal: $ 1.78
1% Ubisi- 1 gal: $ 1.98
Iipesenti ezili-100 zesonka sengqolowa- $ 1.29
Okulandelayo isidlo sasemini. Iisendwitshi lukhetho olufikelelekayo. Sikhethe i-turkey okanye i-ham netshizi, kunye nebhotolo yamandongomane + ibhanana + nobusi. Hlanganisa usuku ngalunye ukuze uhlale unomdla. Isonka samasi Ukuzisika ngokwakho kubiza kancinane kunokuthenga itshizi esele isikiwe, kunye nendalo! Xa ukhetha ibhotolo yamandongomane, khetha uhlobo kunye ne Inani elincinci leswekile. Ukuba kuhlahlo-lwabiwo mali, khetha isodium okanye indalo yokutya kwasemini. Sebenzisa i-bacon eseleyo kwisidlo sakusasa kunye nemifuno kwisidlo sangokuhlwa ukongeza incasa kwisandwich yakho.
100% isonka sengqolowa esipheleleyo: $ 1.29
Ii-orenji zaseMandarin: $ 3.98
Iibhanana: $ 0.48 ngeponti nganye, ~ $ 1.44
I-Turkey- 10 oz: $ 2.50
I-Ham- 12 oz: $ 2.50
Ipeanut butter- 16 oz: $ 2.88
Itshizi- i-32 oz: $ 6.32
Ukutya okutyayo kuyakhuthazwa imini yonke (ukuba nje basempilweni!) Nazi ezinye ukhetho olukhuluIityhubhu zesonka samasi, iziqhamo ezintsha kunye nemifuno, ihummus, isalsa, ibhotolo yamandongomane, + amandongomane, iziqhamo ezomisiweyo kunye nepopcorn (enetyuwa encinci). Ukuthenga amashwamshwam ngaphakathi buninzi inokukunceda ugcine imali; zihlala zihlala ngaphezulu kweveki.
Iminqathe yabantwana- i-32 oz: $ 1.84
Iapilesauce engenaswekile- i-46 oz: $ 1.98
Umxube wendlela- i-42 oz: $ 7.98
Ipopcorn- 5 oz: $ 1.79
Ama-Pretzels- 15 oz: $ 1.50
I-Kiwis- 3 / $ 1: $ 2.00
I-Hummus- 10 oz: $ 1.89
Izidlo ngokulula kunokuba sesona sidlo sibiza kakhulu sosuku. Sikhethe izinto ezinokusetyenziswa kwi izitya ezininzi kunye neentsuku. Xa ukhetha ibhokisi, izinto ezinamathanga okanye ezibhotile zikhetha ezantsi kwisodiyam naseswekile okanye azange zongezwe kwaphela. Imifuno / iziqhamo ezinqiniweyo kunye neefriji zisempilweni njengezintsha kwaye ngamanye amaxesha zibiza ixabiso eliphantsi. Khetha inyama engalungiswanga, kwaye uzilungiselele ngokwakho. Ezinye izidlo esizikhethileyo ziya kwenza okuseleyo okanye unezinto ezaneleyo ezishiyekileyo zokwenza esinye isidlo.
Isidlo 1: I-BBQ yehagu, iitapile ezibhakiweyo kunye neembotyi eziluhlaza
Ihagu chops- 9 ct: $ 7.69
Iitapile ezibhakiweyo- ii-5 lbs: $ 2.98
Isosi ye-BBQ- 14 oz: $ 2.00
Iimbotyi eziluhlaza- iinkonkxa ezi-2: $ 0.78 x 2 = $ 1.56
Isidlo 2: Inkukhu yase-Italiya, irayisi emdaka kunye ne-broccoli
Amabele enkukhu: $ 10.38
Isaladi yokunxiba- i-14 oz: $ 1.86
I-Brokholi- 12 oz: $ 1.28 x 2 = $ 2.56
Irayisi emdaka- 16 oz: $ 0.67
Isidlo 3: Isoseji, irayisi kunye nemifuno
Isoseji yenkomo- 12 oz: $ 3.99 x 2 = $ 7.98
Imifuno efriziweyo- i-14 oz: $ 1.98 x 2 = $ 3.96
Isidlo 4: I-Turkey tacos okanye i-quesadillas w / salsa
Iifortra- $ 0.98
Iibhontshisi ezimnyama- 15 oz: $ 0.78 x 2 = $ 1.56
Itswele: $ 0.98
Utamatisi- $ 1.48
Ii-avocado- $ 0.68 x 2 = $ 1.36
Umhlaba weTurkey- 1 lb: $ 2.49
Ingqolowa- 15.25 oz = $ 0.78
Ukutya kwesi-5: I-spaghetti yaseTurkey ngesaladi kunye ne-zucchini
Umxube wesaladi we-organic- $ 3.98
Amakhowa- $ 1.58
Utamatisi we-Cherry- $ 1.68
Iikhukhamba- 2 x $ 0.50 = $ 1.00
I-noodle yengqolowa- i-16 oz: $ 1.28
IZucchini- $ 0.98 / lb
Isosi yespaghetti- 24 oz: $ 1.89
Isidlo sethu sangokuhlwa sasiyi- $ 66.15; ukuzisa itotali yethu
Inani leveki ukuya kuthi ga kwi-130 yeedola kuzo zonke izidlo. Sikhethe ukuya phantsi kwe- $ 160 uphawu ukuvumela umahluko wexabiso kunye nokuvumela ukuthanda ukutya okukodwa.
Ukuphila impilo enokwenzeka kuhlahlo-lwabiwo mali, kuthatha nje ukucwangciswa ngononophelo. Zive ukhululekile ukudibanisa ezi ndlela kunye nokutya; ngenxa yokuba isithi yinto yasebusuku, oko akuthethi ukuba ayinakuba sisidlo sasemini okanye isidlo sakusasa!
** Iphepha elichazayo ukuba awunanto yakwenza nelungelo lokushicilela: Asinawo amalungelo alo naluphi na uphawu kunye neemveliso eziboniswe kule mifanekiso. Sisebenzisa le mifanekiso ukunceda ukukhuthaza impilo esempilweni kwaye efikelelekayo. Yonke imifanekiso yathathwa kwi-HEB. **
egqithileyo ngeposi Previous: IVeki yokungondleki
Okulandelayo elilandelayo: Ukufumana uninzi lweMveliso yakho kwiNtwasahlobo